လိုသုံးတဲ့ စကားလေးနှဈလုံးတညျးပဲ တကယျတမျး အဲ့လို လကျတှကွေုံ့တဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ခံရခကျတယျ . မလိုတဲ့အခါ မထေ့ားတတျကွပွီးမှ လိုတဲ့အခါ ပွုံးပွုံးလေးအနားကပျလာကွတာလေ ။ တခြို့ဆို လိုတုနျးခဏလေးပျေါလာတာတှရှေိတယျ ပွီးတာနဲ့ ဘယျရောကျလို့ရောကျသှားမှနျးမသိတော့အောငျ ကိုယျဖြောကျနနေိုငျစှမျးတှရှေိပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ဘကျက လူတိုငျးအပျေါစတေနာအစဈအမှနျတှပေဲ ပေးတယျ သူ့အလှညျ့တုနျးက ကူထားလို့ကိုယျ့အလှညျ့ကြ သူရှိနပေေးလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှမေထားဘူး ။ ကိုယျပေးနိုငျတဲ့အရာဆို စတေနာသနျ့သနျ့လေးနဲ့ ပေးတယျ ။
လိုသုံးတဲ့ စကားလေးနှစ်လုံးတည်းပဲ တကယ်တမ်း အဲ့လို လက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ ခံရခက်တယ် . မလိုတဲ့အခါ မေ့ထားတတ်ကြပြီးမှ လိုတဲ့အခါ ပြုံးပြုံးလေးအနားကပ်လာကြတာလေ ။ တချို့ဆို လိုတုန်းခဏလေးပေါ်လာတာတွေရှိတယ် ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းမသိတော့အောင် ကိုယ်ဖျောက်နေနိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က လူတိုင်းအပေါ်စေတနာအစစ်အမှန်တွေပဲ ပေးတယ် သူ့အလှည့်တုန်းက ကူထားလို့ကိုယ့်အလှည့်ကျ သူရှိနေပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေမထားဘူး ။ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆို စေတနာသန့်သန့်လေးနဲ့ ပေးတယ် ။